Seenaa Gabaabaa Gooticha Oromoo Jaal Laggasaa Wagii Meettaa
Akka kanatti jaal Laggasaa Wagii bara 1998/99 irraa kaase itti aanaa moonaa leenjii WBO waliigala tahe hojjaacha turuu isaa seenaan isaa ni addeessa. Bara 2000 irraa kaase barumsaa fi haaroomsa waraanaa, siyaasaa fi tikaa erga baraate booda ajajaa WBO-Zonnii dhiha Jaal Irreessaa Caalaa jalatti ajajaa bobbaa fi quunnamtii Dhiha Oromiyaa tahuun bara 2002 dirqama dhaabaa fudhatee gara dirree dhihaatti moonaa leenjii waliigala dhaabichaa irraa bobba’e. Sochii seena qabeessaa fi mootummaa Woyyaanee raase WBO bara 2002 baddaalee Dhiha Oromiyaa Qeebbee, Dambi Dolloo, Gidaamii, Begii fi Mandii keessatti tahaa turan irratti akka ajajaa waraanaa fi
siyaasaatti hogganummaa mul’ataa kennee jira. Erga Ajajaan WBO Dhiha Oromiyaa Jaal Irreessaa Caalaa wareegamee boodaa hanga 05/11/2008 wareegametti, ajajaa WBO Dhiha Oromiyaa tahuun falmaa hadhaawaa fi gootummaan guutamee diina waliin tahe hoggana waraanaa fi siyaasaa kennaa ture. Jaal Laggasaan dirqama sadarkaa adda addaatti irra ture hunda keessatti, gootummaan, cichoominaa fi obsaan kan dirqama isa baha ture fi fakkeenya guddaa miseensoota, qondaalotaa fi hoggantoota ABO, qabsahoota fi sabboontota akkasumas ummata Oromoo hundaaf nama tahee dabre dha.